Usuku My Pet » 7 Amathiphu For a Ubuhlobo Romantic
Ingelosi uthando wangqongqoza emnyango wakho? Wena ungomunye abanenhlanhla, kodwa manje kufanele ugcine ilangabi. Kanjani labo imibhangqwana okuphakade do it? Uqinisile ukubheka isiqondiso sabo futhi ungazami ukufunda okuthile kubo. Nazi ezinye izimfihlo zabo namathiphu ulondoloze ubuhlobo romantic yimpumelelo:
Akukona konke ngawe, kodwa eziningi zobuhlobo bethu bakuthola imithombo yabo abalingani ezimbili’ ukusiqhenya. Ngempela, ngaphambi umuntu onothando, onakho kuphile in Ngivumelana ngokugcwele wena, ukuthanda futhi awuzethembi. Ukuba umbhangqwana akuyona ithuba ukufihla ngemva kothile. Ingabe yena / yona bright? Musa zibuze ukuthi kungani yena / yona unawe. Kunalokho, qiniseka wenze nomdlalo omuhle. Yena / yona futhi inamathuba ukuba nomuntu ofana nawe. Ngaphandle kokuba sokuzethemba, kufanele zibone lokho oyikho, futhi lokho umlingani wakho ubona kuwe.
2. Wozele umhawu yakho
Ukuba umbhangqwana kusho ukuhamba ndawonye ohlangothini olufanayo. Ukuthembela nomunye kubalulekile futhi ngokuqondile nokuhlela ukuzethemba kwakho. Umlingani wakho uhlela ukuba ubusuku nabangane in a bar? Inike / yakhe isikhala bese wenze angashayi nabo imibuzo efana: Kade ukuphi? Were girls khona / guys? Umhawu kuyakhathaza futhi ngokuqinisekile kuyindlela engcono ukuthumela umuntu away.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngokuba in a mbhangqwana ukuthi une umuntu ukukusekela esenkingeni. Yamukela isikhuthazo, futhi nesimo sengqondo esifanayo lapho umlingani wakho udinga it. Noma ubani ubuhlobo ngempumelelo uzokutshela ukuthi abalingani romantic kukhona, okokuqala nje, qotho futhi asekelayo abangane komunye nomunye, ngasemuva kuphela, abathandi.
4. Kusimangaze nomunye
Sonke sizizwa nemiphumela isimiso, lokhu nokugqwala oguqula wena kanye isithandwa sakho zibe embhedeni amazambane. Sonke sibe nemikhuba yethu esincane ingagcwalisa ukuphila kwethu, kodwa uma ufuna ukugcina flame ubuhlobo bakho phezulu, zama ukuba ugxile by isimiso sansuku zonke ngaphandle esonta empilweni yakho. Phumani ndawonye, okuhlangenwe nakho new. Khumbula ukuthi uthando like a baby, kudingeka zondliwe.
Ukukhulumisana Open kuyindlela surefire ebuhlotsheni enamandla. Kuyasiza uthole bazana kangcono, ukuqonda indlela ozizwa ngayo ezindabeni ezahlukene, futhi bheka iphuzu omunye of view. Musa ukwakha izinqaba sand! Ukuxhumana nabanye kanye izisekelo ubuhlobo yakho izobe aqinisa in ukhonkolo.
6. Zinike isikhathi esizoba ngesakho wedwa
Ubuhlobo idinga isikhathi abazinikele, kodwa lokhu akusho ukuthi umlingani ngamunye ngeke abe lutho ngaphandle. Kusadingeka abangane bakho, oyithandako kanye nomsebenzi wakho! Nokuzinika isikhathi esithile nabo futhi wedwa. A amahora ambalwa ngaphandle umlingani wakho uzokwenza wena miss futhi sazise nomunye more.
7. Thembeka nomunye
Ubuqotho kuyinto isisekelo sane for yiluphi uhlobo ubuhlobo. Yiba bathembeke komunye nomunye ukuxhumana imizwa yakho uyashaya noma non-ngekukhulumisana. Lokhu kuyomane kwenze uxhumano lwakho luqine.
I Bheka Othile I Like – Manje Yini?